Shina avo aryry tokana Lighting pole for Airport mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole for Airport
Seranam-piaramanidina 20 25 30 m jiro avo roa ho an'ny lalambe, seranam-piaramanidina
1. Fahazavana lehibe lehibe, jiro hazavana tsara, loharanom-pahazavana mora, faniloana fanamiana, glare kely, mora fehezina, fikojakojana
2. Toerana azo ampiharina: efamira ao an-tanàna, seranana, toham-by, fitetezana arabe, lapan'ny tanàna, sns.
3. Ny tsato jiro dia vita amin'ny fametahana takelaka vy manjelanjelatra mankany anaty vy vita amin'ny piramida ary manao fikarakarana mafana miaraka amin'ny fitsaboana anticorrosive.
4. Bolam-pandeha haingana, tsaramaso vy vita amin'ny vy
5. loharano: jiro sodium, LED
avo andry tokana Light for Airport
LED avo andry tokana Lighting Pole for Airport
15M 18m 20m 25m 30m 35m 40m LED avo andry nykana Lighting Pole for seranam-piaramanidina, Airport 20 25 30 metatra avo pole fahazavana for avoway.Large faritra fahazavanaing, fahazavanaing vokatry dia tsara, fahazavana loharano foibe, fanamiana hazavana, Mamirapiratra mankarary maso dia kely , tsotra ny fanaraha-maso, fanamboarana.
Buy avo andry tokana Lighting pole for Airport nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba avo andry tokana Lighting pole for Airport ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized avo andry tokana Lighting pole for Airport Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.